We She Me: ကော်လံ အပို ထပ်ထည့်ခြင်း
KhinLayThant - 8/13/08, 1:47 AM
Thanks for your useful post in IT. plz post more , Ko Andy !
gulu - 8/13/08, 12:52 PM
ဟုတ်တယ်ဗျ။ new column ထဲ့မယ်ဆိုရင် ဘာမှ မဖြစ်ဘူးလို့ပဲတွေးကြတာများမယ်ထင်တယ် (ကျနော်တော့ အဲ့လိုတွေးခဲ့တယ် :D )
အခုလိုရေးပြတာ ကျေးဇူးပါ :) နောက်လည်း ဒါမျိုး အမှတ်တမဲ့ သတိမထားဖြစ်တဲ့ IT Knowledge လေးတွေ အဆင်ပြေတိုင်းရေးပေးပါ :)
khaingzm - 8/13/08, 3:47 PM
Looking forward to your coming post about unit testing ..
ပီတိ - 8/14/08, 10:30 AM
Database မှာပြောင်းလိုက်တာနဲ့ သေချာအောင် Unit test ကပြန်လုပ်ရတာပဲနော်။ Programmer တွေကတော့ unit test ကိုလည်းလုပ်ဖို့ အင်မတန်ပျင်းပါတယ်။ နောက်ပြီး ကိုယ်ရေးတဲ့ program အမြဲမှန်တယ် ထင်တတ်ရဲ့…
သဉ္ဇာ - Thinzar - 8/14/08, 11:56 AM
Good practice တွေကတော့ မှတ်သားစရာပါဘဲ။ အခုလို အတွေ့ အကြုံတွေ ဖလှယ်ပေးတာ သဉ္ဖာတို့လို ခုမှ စပြီး အိုင်တီလောကထဲ ၀င်ခါစအတွက်တော့ တကယ်ကို တန်ဖိုးရှိပါတယ်။ တစ်ချို့အရာတွေက စာက မသင်ပေးဘဲ အတွေ့အကြုံက သင်သွားပေးတာဆိုတော့လေ။ ကိုပီတိပြောသလိုဘဲ သဉ္ဖာလည်း unit test လုပ်ဖို့ အရမ်းပျင်းပါတယ်။ အချိန်ရရင် unit test ကို ဘယ်လို အကောင်းဆုံးနဲ့ အလွယ်ဆုံး လုပ်နိုင်မလဲ ဆိုတာလဲ ရေးပေးပါဦး။ testing ကလည်း ပညာ တစ်ခုဘဲနော်။ အခုလောလောဆယ်တော့ ကိုယ်ဘဲ programmer ကိုယ်ဘဲ DBA ကိုယ်ဘဲ tester ဆိုတော့ testing ကို လုံးဝ ဂရုမစိုက်နိုင်ဘူး ဖြစ်နေလို့။
Andy Myint - 8/14/08, 9:47 PM
Thanks for reading...Ma Khin Lay Thant
ကျွန်တော်လည်း ထင်ခဲ့တာပါပဲ Gulu
I will try to write about Unit Testing soon Ma Khaing Z M
မှန်လိုက်လေ ကိုပီတိရေ... နောက်ပိုင်းတော့ ကိုယ်ရေးတာတွေက အကုန် မမှန်ဘူးဆိုတာ သိလာပေမယ့် ဘယ်နား မှားနေသလဲ ဆိုတာတော့ မသိသေးတာ ခက်တယ်
ဟုတ်တယ် ညီမ သဉ္ဇာ ဒီလို အတွေ့အကြုံတွေကို များများ ရေးသွားပါမယ့်။ သီအိုရီနဲ့ How to တွေကတော့ စာအုပ်ဖတ် အင်တာနက်မှာ ရှာနိုင်တာပဲ။
Unit Test လုပ်ဖို့ ပျင်းတယ်လို့ ပြောတာ ကျွန်တော့်အတွက် စဉ်းစားစရာ ဖြစ်စေတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲ ဆိုတော့ ကျွန်တော်တို့က Unit Test ကို Automate လုပ်ထားတာ ဆိုတော့ အစအဆုံး နီးပါး သူ့ဘာသူ Run ပြီး စစ်သွားပေးတာပဲ။ ဒီအကြောင်းတော့ အမြန်ရေးဖို့ လိုပြီ ထင်တယ်။
ပီတိ - 8/15/08, 2:23 AM
ဟုတ်ကဲ့ ကိုအန်ဒီ… automated unit testing အချိန်ရရင် ရေးပေးပါဦး…ကျေးဇူး